Kuyinto isimo sobuntu ukuphupha futhi sihlelele ikusasa. Ngaphandle kwale akunakwenzeka uphila impilo egcwele, ngoba ngaleso sikhathi akukho okufanele siyiphishekele. Ngazo zonke izikhathi abantu babheka izindlela lapho izifiso zabo azogcwaliseka ngokushesha nangokunembile. Tales legends - isiqinisekiso kweqiniso, lihlale endaweni yezimangaliso letentiwako ngosizo izinto zemilingo. Namuhla-ke kwaduma ukuba umuthi izifiso, okuyinto kusiza wagcwalisa zonke izinhlelo zethu. Zikhona ongakhetha eziningi indalo yayo, futhi lesi sihloko sizoxoxa ezidume kakhulu.
Isihlahla izifiso ngezandla zabo
Indlela elula ubhekwa ukukhiqizwa kwezinkuni usebenzisa okudweba elula. Ukuze wenze lokhu, ukulungiselela izinto ezilandelayo: iphepha, amapeni emibala, amakhrayoni nofana amapensela. Chubeka udvwebe isitshalo enhle namahlamvu ezinkulu, noma izithelo ukuthi udinga ukuba umuntu ahlale ehlanzekile - akukho Ukufiphaza. Bona (amaqabunga noma izithelo) ukubhala konke iphupho lakho eziyigugu kakhulu futhi ulindele ukuba zigcwaliseke. Kodwa abantu abambalwa lucky namanje belulekwa ukuba bathathe izinyathelo nokwenzeka ukufeza amacebo akhe lapho izifiso zaneliswa ngokushesha. Ungasebenzisa futhi amaphrojekthi ngomumo eyenziwe - emthini izifiso, isifanekiso zazo aboniswe ngezansi, uphelele le njongo.
Ngamaholide zinzima ikakhulu ukukholelwa isimangaliso, ngakho ngalesi sikhathi labetibambile yezinkonzo eziningi lwendabuko eziphathelene ngcono inhlalakahle. Namuhla isihlahla ngokuyisimangaliso iba Imfanelo ebalulekile mkhosi. It is wadala for usuku lokuzalwa, enza isimo izinto eziningi ezincane, njenge paper noma ngocingo, kanti amacembe kufakwe sequins, ubuhlalu noma akhazimulayo ubucwebe. Ngo kwesihlahla Unyaka omusha esikhundleni bendabuko isihlahla sikaKhisimusi, futhi okuxhumanisa umdweshu kuso nge incazelo amaphupho abo. Isihlahla izifiso umshado kungenziwa shi, esikhundleni incwadi zabo zendabuko ifisa izivakashi. Le nqubo elula yalesi wobuciko lapha ngenzansi.
Izinyathelo yokudala isihlahla lomshado
Kuyinto kudingekile ukulungisa Whatman noma ngendwangu, usayizi waso kuzoncika lemali emcimbini. Uma isivakashi lungaphezu ke ungenza amalungiselelo ezimbalwa, isib for izihlobo, abangane, ozakwabo kanye nabanye.
Sebenzisa ngesisekelo izitshalo elikhanyayo dweba, ukugcwalisa asele isikhala izithombe ilanga, izimbali, izinyoni, rainbow nezinye. Isithombe kufanele uthole omuhle futhi omuhle kakhulu. Ungakwazi ukuphathisa engathí sina enjalo abaculi professional, eqinisweni udale wobuciko okukhethekile uyisikhathi eside igcinwe ingobo yomlando umndeni.
Lungiselela esitsheni ngopende (kangcono ivolumu ephansi, kodwa amayunithi ngaphezulu), noma inki pads kanye usula noma amathawula. Paint kungcono ukukhetha ephephile, ukugwema okuvela ukusabela kabi komzimba kubantu.
Buza wonke umuntu ukushiya celebration wedding in the indaba emfushane entendeni ukuphrinta noma zeminwe - endaweni ukuze amahlamvu noma izithelo (kuncike kuncike isithombe). Uma izivakashi ukushiya handprint ke kungcono ukukhetha shades ukuxegiselwa yanoma yimuphi umbala ukuze bakwazi ukuhlukanisa yombhalo oqoshiwe.
On handprints bakhe bonkhe kuba nezicelo ezibhalwe phansi, futhi eduze loop umunwe ishiywa kuphela amagama abo.
Ngemva kokuphela emcimbini, ozoba ngaphansi umculo ezifanele futhi ephelezelwa amazwana Toastmasters, afaka i-emfushane anezinhlaka kwaphiwa abasha.
Wish Tree sobuhlalo
Ukwakha umuthi onjalo udinga izinto ezilandelayo: wire, ubuhlalu, impintshisi, ikhonteyina, simulating imbiza imbali futhi glue. Izigaba wobuciko ezifana elandelayo:
Kuyadingeka ukwenza workpiece (amahlumela ngesikele sokuthena) - ubuhlalu ahlukaniswe on a wire ngokuwufaka ngesizotha phakathi ucezu cut. Isibalo buhlalu workpiece ngamunye kuncike Usayizi kwesihlahla esizayo.
Ukusonta emikhawulweni wire ukuze bathole loop lobuhlalu nge ezisontekile "umsila" eside.
Hlanganisa zonke izihibe esekelwe (wesibhamu) okwenziwé izintambo osontekile ububanzi emikhulu. izihibe ukusabalala (amagatsha). Fluffiness "umqhele" kuzoncika inani workpieces.
Ethangini, okuzokwenza ukukhonza njengomdala belingisa imbiza imbali, uthele futhi uthele glue ubuhlalu. "Ukuze itshale" isakhiwo esihlahleni bese uvumele ukuze ome.
Sabalalisa zonke izihibe, amacembe kanye ukuhlobisa ubuhlalu noma rhinestones ethangini.
Izifiso ezinjalo isihlahla kungaba samanje njengoba izipho kuphela nabangane nabantu obajwayele.
Emazweni amaningi, zikhona izihlahla bukhoma, ezisiza abantu - enze izifiso zabo. Ngokuvamile kuba izitshalo enamandla futhi enhle, etholakala epaki noma endaweni yokungcebeleka. On namagatsha awo ahlanganiswe ezilahliwe izifiso ezijabulisayo, futhi izimpande ngokuphonsa imali ngokushesha wakhulelwa ugcwalisekile. Abaningi bathatha uhambo kulezi zindawo engcwele, ecabanga ukuthi enye indlela ephumelela ngaphezu ukuletha inkathi ukusebenza izifiso zabo. Isenzakalo esidume kunazo zonke zazo zichazwe ngezansi.
Imali se-okhi * Scotland, esiqhingini Marie. amagxolo abantu babeka iinhlamvu ezincane bese ucela kwesihlahla ngokushesha ezokhipha icebo lakhe.
Mhlawumbe kakhulu lasendulo isihlahla izifiso kuyinto e-India. Ubukhulu balo zinkulu kangangokuba asikwazi bamukele amadoda omdala kunabantu. On amagatsha kudabuke giant multi-anemibala abopha nebhalsamu namagxolo bakhe kungasongwa akambonanga zemali kuphela, kodwa futhi izithombe ezincane!
On the Maldives ikhula esihlahleni, okuyinto eza ofisa ukuba ingane. Kuyinto lasendulo ukuze akunakwenzeka ukuhlukanisa phakathi izimpande amagatsha, okuyinto abethela ezilahliwe ezinemibala.
isihlahla Omangalisayo, ungakha engadini yenu noma ifulethi ngokukhetha isitshalo enempilo kakhulu futhi oyingqabavu. On usuku yakhe lenkhulu kudabuke uthayi nomndeni izifiso, waziyisa izimpande ongokomfanekiso "umhlatshelo". Kukholakala ukuthi lokhu isihlahla kusiza futhi ukhonza njengentelezi kuwo wonke amalungu omndeni.
Isihlahla izifiso kufanele uhlale izimpande, ngoba zifanekisela sokuphehla amandla futhi yokuxhumana kwawo amandla omhlaba. Uma singasinaki salo mthetho, isifiso-agcwaliseka ngaleso sikhathi kungenzeka lihlehliselwe isikhathi eside noma ungalokothi zigcwaliseke. Phela, uma azikho izimpande, okuyinto zizosebenza ngoba ukuqaliswa kwe-wakhulelwa?
Entsha "Opel Antara": ezibekiweko lobuchwepheshe kanye nencazelo jikelele